GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Mizo Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Otu akwụkwọ a na-akpọ Encyclopædia Britannica kwuru na Ista bụ ‘ememme Ndị Kraịst na-eme iji na-echeta Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Kraịst.’ Ma, ememme a ọ̀ bụ ememme Ndị Kraịst n’eziokwu?
Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịchọpụta ma ihe ọ̀ bụ nke ezigbo ya ka ọ̀ bụ nke adịgboroja, o kwesịrị ileru ya anya nke ọma. Ọ bụrụkwa na anyị chọrọ ịma ma Ista ọ̀ bụ ememme Ndị Kraịst ka ọ̀ bụ na ọ bụghị, anyị kwesịrị ileru ihe gbasara ya anya nke ọma.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-echeta ọnwụ ya, ọ bụghị mbilite n’ọnwụ ya. Pọl onyeozi kpọrọ ncheta ọnwụ Jizọs a “Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị.”—1 Ndị Kọrịnt 11:20; Luk 22:19, 20.
Ihe ọzọ bụ na akwụkwọ ahụ a na-akpọ Encyclopædia Britannica kwukwara na “o nweghị ihe jikọrọ” ihe ndị a na-eme n’oge Ista na mbilite n’ọnwụ Jizọs, “kama na e si n’omenala ndị mmadụ nweta ha.” Dị ka ihe atụ, mgbe akwụkwọ ahụ na-ekwu gbasara àkwá na oké bekee a na-eji agba Ista n’ọtụtụ mba, ọ sịrị na ‘àkwá ahụ nọchiri anya ndụ ọhụrụ na-esi n’àkwá apụta ma àkwá gbawaa.’ O kwukwara na “ihe e ji mara oké bekee bụ na ọ na-amụ ọtụtụ ụmụ. Ọ bụ ya mere e ji were ya ka ihe na-egosi oge ihe a kụrụ n’ubi ji eme nke ọma.”
Otu nwoke aha ya bụ Philippe Walter, onye mụrụ gbasara akwụkwọ ndị mgbe ochie, kwuru otú e si webata omenala ndị a n’ememme Ista. O kwuru na “mgbe ndị mmadụ na-achọ otú ha ga-esi eme ka ndị ọgọ mmụọ ghọọ Ndị Kraịst,” ha mere ka otu ememme ndị ọgọ mmụọ na-eme yie ka ò nwere ihe jikọtara ya na mbilite n’ọnwụ Jizọs. Ndị ọgọ mmụọ a na-eme ememme a maka na “oge oyi agaala, oge opupu ihe ubi eruwekwala.” Nwoke ahụ kwukwara na ọ bụ otú ahụ ka e si bido mewe “ememme Ndị Kraịst” n’oge ndị ọgọ mmụọ ji eme nke ha. Ihe a meziri ka ọ dịrị ọtụtụ ndị ọgọ mmụọ mfe ịbata na chọọchị.
Ma, e sighị otú a mee ka ndị mmadụ ghọọ Ndị Kraịst n’oge ndịozi Jizọs. Baịbụl kwuru na ndịozi ahụ bụ “ihe mgbochi” mgbe ahụ. Ha ekweghị ka e webata ihe ndị ọgọ mmụọ n’ọgbakọ Ndị Kraịst. (2 Ndị Tesalonaịka 2:7) Pọl onyeozi kwuru na mgbe ọ “pụsịrị,” e nwere ndị ga-ebido “na-ekwu ihe gbagọrọ agbagọ iji dọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs ka ha sowe ha.” (Ọrụ Ndịozi 20:29, 30) Ná ngwụcha oge ndịozi Jizọs, Jọn onyeozi kwuru na e nweela ndị malitere iduhie Ndị Kraịst. (1 Jọn 2:18, 26) Ihe a meziri ka ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst mechaa mewe omenala ndị ọgọ mmụọ.
“Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu.”—2 Ndị Kọrịnt 6:14
Ụfọdụ ndị nwere ike iche na ihe ndị ahụ a na-eme n’oge Ista enweghị ihe ha mere, ebe ọ bụ na o mere ka “ndị ọgọ mmụọ” ghọtakwuo ihe mbilite n’ọnwụ Jizọs pụtara. Ma, ọ bụrụ na Pọl onyeozi nọ ya ugbu a, ọ gaghị ekweta n’ihe a ndị mmadụ chere. Ọ bụ eziokwu na Pọl hụrụ ọtụtụ omenala ndị ọgọ mmụọ mgbe ọ na-ekwusa ozi ọma n’obodo dị iche iche ndị Rom na-achị, ma o webataghị omenala ndị ahụ n’ọgbakọ Ndị Kraịst ka o nwee ike inyere ndị ọgọ mmụọ aka ịmatakwu banyere Jizọs. Kama ime otú ahụ, ọ dọrọ Ndị Kraịst aka ná ntị, sị: “Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu, nke bụ́ nkekọ na-ekwekọghị ekwekọ. N’ihi na olee ihe jikọrọ ezi omume na mmebi iwu? Ma ọ bụ, olee òkè ìhè na ọchịchịrị nwere? ‘Ya mere, sinụ n’etiti ha pụọ, kewapụnụ onwe unu,’ ka Jehova sịrị, ‘kwụsịkwanụ imetụ ihe na-adịghị ọcha aka.’”—2 Ndị Kọrịnt 6:14, 17.
Olee ihe anyị chọpụtara ugbu a anyị lebachara anya n’ihe ụfọdụ gbasara Ista? O doola anyị anya na Ista abụghị ememme Ndị Kraịst.
Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Ga-eme Ka Ndị Ọzọ Nweta Ndụ Ebighị Ebi.
Chegodị otú ndụ ga-adị mgbe ndị mmadụ na-agaghị anwụkwa anwụ ma ọ bụ taa ahụhụ!
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Mach 2015 | Gịnị Ka Jizọs Gbapụtara Anyị na Ya?